Amin'izao fotoana izao, manamboatra rafitra maro samihafa ny manam-pahaizana. Ny sasany dia mikendry ny hanatsara ny vatana, ny hafa manampy amin'ny fahazoana mavesatra, ary ny hafa dia mametraka fitsipika manan-danja izay manamora ny asan'ny taova. Diniho ny rafitra sakafo moderina sy nentim-paharazana ary dinihina ny fahombiazan'izy ireo.
Ny sakafo samihafa dia rafitra iray, ny fotom-piorenana niforona teo amin'ny zato taona lasa izay. Ity rafitra ity dia miara-misakafo sakafo samihafa, ary maro amin'ireo fitsipika ampiasain'izy ireo no ampiasaina amin'ny karazan-tsakafo samihafa ho an'ny fatiantoka.
Ity rafitra ity dia mifantoka amin'ny fametrahana ny vokatra. Inoana fa sarotra ny mandany amin'ny vokatra mitovy izay mitaky ny biby hafa, ary ny fitsipika arahin'ity lalàna ity:
Tsy afaka mihinana proteinina isan-karazany ianao amin'ny fotoana iray (ohatra: hena miaraka amin'ny tsaramaso) na karazana karbidra maro (karazana mofo);
Tsy azo atao ny mampifandray proteinina sy karbôgres (pure pine);
Tsy afaka mampifandray siramamy sy voambola (voankazo misy mofo na menaka);
Tsy azo ampifandraisina amin'ny voankazo na ny alikaola, ny pastel ary ny melon.
Amin'izao fotoana izao dia heverina fa diso ny rafitra: ny vatana dia mora mamokatra karazana enzymes amin'ny fotoana iray mba handevonana sakafo samihafa. Ankoatr'izany dia misy proteinina madio na kôbhydrate madio eo amin'ny natiora.
Sakafo sakafo ho sakafon'ny sakafo
Io rafitra ara-pahasalamana ho an'ny fahazoana mavesatra io dia ampiasaina matetika ary mahomby tsara, saingy napetraka ho rafitra ara-tsakafo voajanahary, izay aseho amin'ny olombelona amin'ny natiora. Ny fitsipika fototry ny sakafo ara-pahasalamana toy izany dia tsotra:
Afaka mihinana voankazo sy legioma ao anaty volo mangatsiaka ianao;
ho loharanon-tsakafo azo avy amin'ny proteinina, voanjo ary legumes (ary mena);
Tsy voarara ny fitsaboana amin'ny hafanana (anisan'izany ny tsy fisotroana dite).
Ny sakafo roah dia mitaky fifindrana lava, ny fanavaozana ny vatana. Vokatr'izany, misy olona mijanona amin'ny lanjan'ny vatana, mahatsapa fifaliana sy fahasambarana, manana hery fiarovana matanjaka sy fahasalamana goavana izy. Ny sakafo matsiro dia matetika ampiasaina ho sakafo fohy ho an'ny fahaverezan'ny fahavoazana, ary izany dia manome vokatra tsara.
Mitabataba mandritra ny herinandro
Ity rafitra sakafo ity dia midika ho fandavana ny sakafo tsotra ho an'ny orinasa ao amin'ny orinasa, izay tsy dia mahazatra firy, mandanjalanja ary mahavariana. Misy programa maromaro maromaro:
"Sakafo sakafo nentin-drazana miaraka amin'ny hena";
Ny sakafo proteinina fitahirizana sakafo;
"Diary Express" telo andro;
programa andro iray "Andro famoahana".
Ity rafitra sakafo moderina ity dia tsy azo ampiasaina ho rafitra ara-tsakafo mandritra ny androm-piainana (ity no fomba noraisina midika hoe rafitra herinaratra eo amin'ny lafiny klasika). Ity dia fomba iray amin'ny fahaverezan'ny lanjany, ary mety halefa ny sakafo raha efa nahatratra ny lanjany tsara indrindra. Ankoatr'izany, ny vokatra ao amin'ny programa dia ampitomboina amin'ny vitaminina manokana vitamina, izay hanampy amin'ny ady amin'ny tsy fahampian'ny singa rehetra.
Rafi-pampiasa herinaratra manokana
Matetika, miaraka amin'ny klioban'ny fanatanjahan-tena, mpikaroka sakafo iray, izay afaka mandinika amim-pitandremana anao ary, mifototra amin'ny karazan-tarehinao sy ireo safidy maro hafa, dia manombatombana ho anao ny sakafo tsara indrindra izay hahatratra ny tanjonao.
Izany angamba no iray amin'ny safidy tsara indrindra, noho izany, hitady "ny anao" ianao fa tsy amin'ny fizahana, ny fahadisoana ary ny fanandramana amin'ny anao manokana, fa avy hatrany dia mahazo programa vonona izay ho azonao amin'ny endri-javatra rehetra. Ankoatr'izany dia ho afaka hanao fandaharanasa fanatanjahan-tena ianao, izay midika fa ho ampy tsara sy ho afaka hanana endrika tsara ianao, tsy amin'ny sakafo ihany, fa amin'ny fanatanjahantena.
Mayonnaise - votoaty kalorika
Sakafo mihinana iodina
Mihoatra ny calcium ao amin'ny vatana - soritr'aretina
Voajanahary - Mahasoa sa Manimba?
Aminophylline avy amin'ny cellulite
Asidra amine sy proteinina
Ny ronin'ny Goat dia tsara sy ratsy
Fehiloha tsy misy firavaka - 32 sary avy amin'ny modely modely amin'ity vanim-potoana ity sy ny fomba fitondra azy ireo?
Ny ankizy dia kohaka mafy - inona no tokony hatao?
Hatsy ho an'ny akanjo mimônera - ireo headdresses indrindra lamaody
Hugh Jackman dia nanafintohina ireo mpankafy tamin'ny fijeriny haggard
Ahoana ny fifandraisana amin'ny router Wi-Fi?
Ahoana no ahitanao ny fonony amin'ny sofina?
Inona no hohanina alohan'ny fampiofanana mba handorana ny hena?
Nahoana ny alika no mihodina?
Mialà amin'ny akorandriaka
Lactofiltrum ho an'ny ankizy
Kim Kardashian sy Jessica Alba tamin'ny Awards Webby
Ahoana no tokony handoko ny maso amin'ny aloka?